दशैंमा टेलिकमको ५ अफरः सस्तो प्याक, डाटादेखि बोनससम्म « Ramechhap News
दशैंमा टेलिकमको ५ अफरः सस्तो प्याक, डाटादेखि बोनससम्म
काठमाडौं, २६ असोज । घरमा इन्टरनेट नभएकाहरुलाई डाटाबाट नेट चलाउनु निकै खर्चिलो हुन्छ । तर, अब यो चिन्ता हराउने भएको छ ।
यो अफर अन्तर्गत जीएसएम तथा सीडीएमए मोबाइलमा अनलिमिटेड भ्वाइस र अनलिमिटेड एसएमएस सेवा उपभोग गर्न सकिने छ । ६ सय रुपैंयाँमा १५ दिन समयावधिको लागि प्रत्येक दिन २ जीबी प्याक उपलब्ध गराइने छ ।
यस अन्तर्गत ६ रुपैंयाँमा निरन्तर ६० मिनेट भ्वाइस सुविधा उपभोग गर्न सकिने छ । एक दिनका लागि मात्र उपलब्ध हुने सो सुविधा विहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म उपभोग गर्न सकिने छ । भ्वाइस सुविधा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने छ ।
आगामी असोज २९ देखि कात्तिक ४ गतेसम्म रिचार्ज कार्ड, इलेक्ट्रोनिक रिचार्ज वा एमपोस बाट रिचार्ज गर्दा बोनस प्रदान गरिने भएको छ । रु. १०० र २०० को रिचार्ज कार्ड वा इलेक्ट्रोनिक रिचार्ज मार्फत रिचार्ज गर्दा १० प्रतिशत र रु. ५०० र १००० को रिचार्ज कार्ड वा इलेक्ट्रोनिक रिचार्जबाट रिचार्ज गर्दा १५ प्रतिशत बोनस प्राप्त हुनेछ ।
एडीएसएल–एफटीटीएच र वाइम्याक्सतर्फ
आगामी असोज ३० देखि कात्तिक ६ गते सम्म एडीएसएल–एफटीटीएच र वाइम्याक्सको समयावधि समाप्त हुने ग्राहकहरुको समयावधि कात्तिक ७ गते सम्म थप गरिने छ । यसबाट बीचैमा समय सकिए पनि ग्राहकहरुको सेवा सुचालु भइरहने जनाइएको छ ।